အောက်တိုဘာ ၈ ရက်ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ် / ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ
By ဇူးဇူး 10 October 2018
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့အား ဝေဖန်ထောက်ပြသည့် ဆောင်းပါး တပုဒ်ကြောင့် တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ကို အကြည် ညို ပျက်စေသည်ဟု ဆိုကာ Eleven Media Group မှ တာဝန်ရှိသူ များကို ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် တရားစွဲဆို လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၈ ရက်ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ် စာမျက်နှာ ၂၆ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးရှင် ဖြိုးဝေ ရေး သားထားသော “အမြဲရှုံးနေတဲ့ စက်သုံးဆီဆိုင်တွေ ပိတ်ရေး၊ ငွေချေးသူ ဘယ်သူမှန်း မသိတဲ့ ကျောင်းကားနဲ့ လူအမည် ပေါက် ပြည်သူ့ ရှယ်ယာ” ဟူသည့် ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားစွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးမှ အမှုစစ် တရားသူကြီး ဒေါ်တင်ဝါဝါသိန်းက တရားခွင် အပြီး မီဒီယာများသို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က တရားလို ပြုလုပ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက် လျှောက်ထား စွဲဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် စွပ်စွဲခံရသူ ၃ ဦး အပေါ် ထုတ်ထား သည့် ဖမ်းဝရမ်းကို တာမွေမြို့မ ရဲစခန်းက အတည်ပြု၍ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် ရုံးချိန်းအထိ ချုပ်ရက် ရမန်ယူခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
တရားစွဲဆို ခံရသူများမှာ Weekly Eleven အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်ဇောလင်း၊ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးနရီမင်းနှင့် သတင်း ထောက်ချုပ် ကိုဖြိုးဝေဝင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးရှင် ဖြိုးဝေ၏ ရေးသား ဖော်ပြချက်များသည် အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေကြောင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များကို ထိတ် လန့်စေကြောင်း၊ မမှန်မကန် ရေးသား ဖော်ပြသည်ဟူ၍ တိုင်ချက်ထဲတွင် ပါရှိသည်များကို တရားခွင်အတွင်း တရားသူကြီး ၏ ဖတ်ကြားချက် အရ သိရသည်။
စွပ်စွဲခံရသူဘက်မှ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က “အဓိကက ၈. ၁၀. ၂၀၁၈ Weekly Eleven မှာပါတဲ့ ဖြိုးဝေရဲ့ Yangon Metropolitan ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ရဲ့ အစု ရှယ်ယာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပါး အပေါ်မှာ စွဲတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီတချိန်းမှာ မိတ္တူမရသေးတော့ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်ဦးမယ်” ဟု ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၉ ရက် ညပိုင်းတွင် Eleven Media Group ရုံးသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဝရမ်း ဖြင့် လာရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ရုံးချိန်ပြင်ပ ဖြစ်နေ၍ အမှုဖွင့် ခံထားရသူများကို ရှာဖွေ၍ မတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသူ ၃ ဦးသည် ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီကျော်တွင် တာမွေမြို့မ ရဲစခန်းသို့ လာရောက် အစစ်ခံခဲ့ပြီး တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးချိန်းရမန် ယူခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့ ၃ ဦးအား အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့သည်။
ကိုဖြိုးဝေဝင်းက “လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ပြောတာတွေ ရေးထားတာပါပဲ။ အားလုံးလည်း ဖတ်ရမှာပဲ။ ကျနော် ဘာမှ အမှား မလုပ်ထားဘူး” ဟု တာမွေမြို့မ ရဲစခန်းသို့ လာရောက်စဉ် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရကို ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ရေးကို ဖြစ်စေ ထိခိုက်သည့် ပြစ်မှုကို တဦး တယောက် သောသူက ကျူးလွန်ချင်လာအောင် အများပြည်သူကိုသော်လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူ၏ သီးခြားလူ စုကိုသော် လည်းကောင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း တခုခုဖြစ်စေရန် အကြံရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ဖြစ် စေတန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင် ထိုသူကို ၂ နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဦးကြီးမြင့်က “၅၀၅(ခ)ဆိုတဲ့ သဘောမှာ ခြွင်းချက် ရှိတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းကို မှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ ကို အခြေခံပြီး ရေးလို့ရှိရင် ဒီပြစ်မှုမှာ မမြောက်ဘူးလို့ ခြွင်းချက်ပေးထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့က ဥပဒေနဲ့ အညီ ခုခံ ကာကွယ်သွားရမှာပေါ့” ဟု ပြောဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက Eleven Media Group CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်နှင့် အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးတို့ကို ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ တရားစွဲခံထားရသော တနင်္သာရီဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးမျိုးအောင်က “သက်ဆိုင် သူတွေအနေနဲ့ ဝေဖန် ထောက်ပြမှုတွေကို အခြားတဖက်က အမြင်များ၊ တခရီးတည်း သွားတွေရဲ့ စိုးရိမ် သောက အဖြစ်နဲ့ပဲ ရှုမြင်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ မဏ္ဍိုင်တခု အပေါ် ရှုမြင်ပုံမှားတာဟာ နိုင်ငံ အတွက် ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
Topics: Eleven သတင်းသမား ၃ ဦး